Kicheni michina Vagadziri & Vatengesi - China Kicheni midziyo yemagetsi Fekitori
UV Kucheka Bhodhi ...
Tsanangudzo Model MS-08 / MS-09 ...
Tsanangudzo Rated Voltage 220V 6 ...
Tsanangudzo Model MK-03 Voltage 220 ...
Tsanangudzo Model MH-09 Voltage ...
Inotakurika Tupembenene R ...
Tsanangudzo Model MH-08 Rated P ...
Yakadzika-shuga mupunga mubiki imba yakawanda-inoshanda otomatiki sosi muto yakasarudzika yakaderera shuga hutano mupunga poto kudzikisa shuga. Ita kurasikirwa neshuga sezviri nyore sekufema, shanda uye uremu uye udye zvakajairika. Yakadzika shuga satiety, inonaka kwete mafuta yakaderera shuga mupunga, zviri nyore kudzora shuga yakavharirwa kuravira mabhureki ekuruma uku, rudo!
Yemafashoni uye inoshanda, zviri nyore kutakura uye kushandisa. Yakatetepa uye compact, haitore nzvimbo yakawanda. Iyi compact cooker haizobatanidza tafura yako yebasa. Kana, ingo chengeta iyo kure mudhirowa rako! Kuomesa-kudziyisa kudzivirira uye kupisa kupisa. Aluminium alloy PTC hita, yakachengeteka zvakanyanya. Yakakomberedzwa kupisa kupisa, nyatso kubika chikafu. Kudya Giredhi 304 Midziyo yekudya yakanaka kune ese ekubika uye ekuchengetedza chikafu, 900ml chinzvimbo.
Inotakurika Slow Masticating Juicer: Nutrition nzvimbo yevana vako nemhuri. Slow masticating juicer inotakurika, compact, isina huremu inotonhora yekudhinda juicer ine USB kuchaja, ingoitora, iwe unowana nyowani, inonaka uye ine muto muto chero, chero nguva, kunyangwe yebhizinesi, kufamba kana kumba. Dzivirira oxidation, chengetedza kuburitsa zvimwe zvinovaka muviri mumuto, kukupa muto unovaka muviri. Kunyangwe iyo pulp inogona kushandiswa kujamu, kunhonga madhishi uye nezvimwe.